Nge-28 kaJuni ngeZodiac -Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-28 kaJuni iZodiac yiCancer-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Nge-28 kaJuni iZodiac yiCancer-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Umqondiso we-zodiac kaJuni 28 ngumhlaza.
Uphawu lweenkwenkwezi: Unonkala. Umqondiso weCrab inefuthe kubantu abazalwe phakathi kukaJuni 21 noJulayi 22, xa kubuchwephesha benkwenkwezi yetropiki iLanga lithathwa njengelicancer Ibhekisa kwimoodiness, utshintsho kunye neemvakalelo.
Inkqubo ye- Iqela lomhlaza , Elinye lamaqela ali-12 e-zodiac abekwe phakathi kweGemini ukuya eNtshona kunye neLeo ukuya eMpuma kwaye ububanzi bayo obubonakalayo bungu-90 ° ukuya -60 °. Inkwenkwezi eqaqambe kakhulu yiCancri ngelixa lonke ulwakhiwo lusasazekile kwiidigri ezingama-506.
Igama elithi Cancer livela kwigama lesiLatini leCrab kwaye libizwa njalo eSpain naseFrance, ngelixa eGrisi uphawu lukaJuni 28 uphawu lwe-zodiac lubizwa ngokuba yiKarkinos.
Uphawu olwahlukileyo: ICapricorn. Obu budlelwane bongezelelekileyo kunye noMhlaza kwitshathi yehoroscope bucebisa ukuba nobuntu kunye nokusebenza kwaye kubonisa ukuba le miqondiso mibini inokuncedana njani ekugcineni izinto zilungelelene.
Isimo sokuziphatha: Ikhadinali. Umgangatho ucebisa ubume bomsindo wabo bazalwa nge-28 kaJuni kunye nokuqhuba kwabo kunye nocwangco lwabo kwiminyhadala yobomi.
Indlu elawulayo: Indlu yesine . Le ndlu ibonakalisa ukhuseleko lwasekhaya, iimeko eziqhelekileyo kunye nookhokho. Oku kuthetha okuninzi malunga nomdla wamaCancer kunye neembono zabo zobomi.
Umzimba olawulayo: Inyanga . Olu nxu lumano lokondla kunye nokonwaba. Ikwabonakalisa ukhuseleko kubomi baba bantu. INyanga yeyona inxibelelana neemvakalelo zabantu.
Isiqalelo: Amanzi . Eli nqaku licebisa ubume obungaqondakaliyo nobunzulu babo bazalwa phantsi kwe-28 kaJuni zodiac. Rhoqo bahlala benobubele kwaye beshushu kwaye kubonakala ngathi bahamba nokuhamba nje ngento yabo enefuthe.
Usuku lwethamsanqa: uMvulo . Olu lusuku olulawulwa yiNyanga, ke ngoko lujongana nokuqonda kunye nefuthe. Iphakamisa ubume bexesha lokuzalwa kwabantu bomhlaza.
Amanani anethamsanqa: 2, 3, 14, 16, 24.
Ulwazi oluthe kratya ngoJuni 28 Zodiac ngezantsi ▼
IVirgo Sun Sagittarius Inyanga: Ubuntu obuphuphayo
I-Aries ka-Novemba ka-2017 yoNyanga ngeNyanga
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-septemba 13
Uphawu lweZodiac ngoMatshi 25
kunjani ukuthandana nomfazi wescorpio
loluphi uphawu lwe-zodiac ngumatshi wama-21
i-virgo indoda yomhlaza umfazi umtshato
indoda taurus kunye ne-sagittarius yabasetyhini